Venezoela: Niely ny resabe noho ny fanakanana tranonkala nataon’ny governemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Avrily 2019 3:12 GMT
Herinandro vitsy lasa izay, nitatitra ireo namana sasany mpisera Twitter Venezoeliana fa tsy azo nidirana tamin'ny alalan'ireo fifandraisana omen'ny Cantv (orinasa fifandraisan-davitra lehibe sady mpamatsy aterineto, an'ny governemanta Venezoeliana) ny quelacreo.com (NSFW). Mampiseho votoaty matanjaka tahaka ny sary sy lahatsary momba ny famonoana olona, ​​fandikan-dalàna, fandidiam-paty, ary heloka bevava hafa ny tranonkala izay azo idirana avy amin'ny fifandraisana hafa tahaka ny Intercable. Noho izany, dia nisy ireo karazana fanehoan-kevitra avy amin'ny mpiserasera. Noho ny votoaty mampiady hevitra ao amin'ny tranonkala, miombon-kevitra amin'ny fepetra ny sasany amin'izy ireo:
@luisdirauso: @aimarb @johkhz @YimmiCastillo momba ny quelacreo, mihevitra marina aho fa tsara raha nakatona izy, tsara mihitsy raha esorin'izy ireo izany pejy izany!
Ny sasany amin'izy ireo kosa tsy miombon-kevitra velively amin'ny fepetra, noho ny fiheverana fa mampiseho fandeferana amin'ny politikan'ny governemanta mikasika ny fampiasana ny aterineto izany ary manamarika izy ireo fa manao ampihimamba ny aterineto ao Venezoela ny Cantv, satria manome ny telo am-pahaefatry ny fifamoivoizan'ny tranonkala rehetra ao amin'ny firenena:
@elmocho RT @Marianitareyes: Mampiasa ny Network Access Point ny CANTV mba hanakatonana tranonkala. www.quelacreo.com no voalohany. Iza no manaraka?
@YimmiCastillo: Manivana ireo pejy “tsy azo arovana” tahaka ny quelacreo izy ireo mba hanohitra ny hevi-bahoaka. Tsy ny votoaty no olana, fa ny sivana. #FreeWebVe
Ankoatra izay, voamarika fa norasina tsy nisy dingana ara-pitsarana ny fepetra, ary tsy hanome fanazavana momba izany ny Cantv. Ankoatra izay, roa andro lasa izay, nisy ny fanairana natao fa nobahanana ihany koa ny tranonkala hafa FTAchile.com. Ny FTA dia midika hoe Free To Air, izany hoe tranonkala io manazava ny fomba ahazoana fantsona fahitalavitra sy radio maimaim-poana, manolotra fanorotoroana sy fitaovana amin'ny fanaovana izany. Azo idirana amin'ny alalan'ny mpamatsy tolotra aterineto hafa ireo tranonkala roa ireo ary mbola azo idirana amin'ny fampiasana proxys. Na dia izany aza, tsy miraharaha ity fepetra ity ny tontolon'ny bilaogy, ankoatra ireo mpisera vitsy izay mahita izany ho fiandohan'ny sivana antserasera:
@OSGuidoE: Omaly, quelacreo, androany tranonkala momba ny zanabolana. Ary iza rahampitso? aza mba adala ary atsaharo eto izany. #FreeWebVe
Vaovao farany: Efa azo idirana avy amin'ny Cantv ny FTAchile. Mbola tsy azo idirana kosa ny Quelacreo. Mangataka amin'ireo olona izay manana olana amin'ny fidirana amin'ny tranokala avy ao Venezoela aho, mba hitatitra izany ao amin'ny www.herdict.org.